Agaasimaha AFP ee Algerers oo laga eryay maamulka Aljeeriya - TELES RELAY
ACCUEIL » International Agaasimaha AFP ee Algerers oo laga eryay maamulka Aljeeriya
Agaasimaha AFP ee Algerers oo laga eryay maamulka Aljeeriya
Agaasimaha Agaasimaha Faransiiska-Presse (AFP) ee Algiers, Aymeric Vincenot, ayaa la xiray Talaadadii ay soo saareen Aljeeriya, kuwaas oo diiday in ay cusbooneysiistaan ​​aqoonsigiisa 2019.
eryidda Tan waxay ka timaaddaa sida Algeria waa goobta dhaqdhaqaaqa dibad aan horay loo arag oo caan ah in lagu qasbay marka hore Madaxweyne Abdelaziz Bouteflika laabtiissu u musharaxnimada muddo shanaad, ka dibna si is casilay April 2 ah.
Bilaabay on February 22, this dhaqdhaqaaqa nabad weyn, gaar ahaan xirto by dhalinyarada, ayaa ka socda, baahida ugu weyn ee furfuridda nidaamka oo dhan xoog tan iyo markii xornimada ee Algeria ee 1962, shisheeya bilowga oo ah qofka kaliya ee Mr. Bouteflika iyo qabiilkiisa.
Mudane Vincenot, 45 sano jir ah, oo ku yaala Algiers tan iyo June 2017, ayaa laga rabay in uu ka tago Algeria talaadada dhammaadka muddada kama dambeyska ah ee booliisku ogolaaday markii uu dhammeeyey ogolaanshiyaha joogitaanka.
"Go'aankani wuxuu hoosta ka xariiqay madaxweyne Bouteflika waa mid aan la aqbali karin. Waa su'aal noo muuqata, shuruudahan, si aan u magacaabno Agaasimaha cusub ee Algerers isla markiiba, "ayuu yiri madaxa warfaafinta AFP Fabrice Fries.
"Inaga oo inoo diidaya booska booska booska, go'aankani waxa uu wiiqayaa nidaamkayaga, taas oo ujeedadeedu tahay xaqiijinta dabeecadda taariikhiga ah ee dhacdooyinka taariikheed ee hadda ka dhacaya Algeria," ayuu ku daray Mr. Fries.
- "Dhacdooyinka taariikhiga ah" -
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu hoosta ka xariiqay, in AFP aysan "ka quusan" si ay u sii wado mashruucan ku saabsan dhacdooyinka Algeria, halkaas oo ay awood u leedahay in ay dirto dhowr weeerayaal khaas ah todobaadyadii dhawaa. Hay'addu waxay sii wadi doontaa in ay faylasha fiisaha u gudbiso suxufiyiinta kale, sida uu sheegay agaasimaha wakaaladda wararka.
Madaxa xafiiska AFP, ruqsadda degenaanshaha ee Algeria ay soo gabagabeysay Febraayo 28, ma lahan wax aqoonsi ah tan iyo dhamaadkii sannadkii hore.
Codsiga dib u cusbooneysiinta kaadhkiisa saxaafada ee 2019, dukumeentiga shuruudaha helitaanka ruqsadda degenaanshaha, weli wax jawaab rasmi ah kama soo bixin mas'uuliyiinta, inkastoo dadaallada AFP si loo helo sharaxaad.
Mas'uuliyiinta Algeria weligood si rasmi ah uma ogeysiin maamulka Maamulka go'aankooda iyo sababahooda.
Waxay si fudud u hadlayaan, markii ay booqdeen Algiers bishii Maarso ee sarkaal ka tirsan Hay'adda, cabashooyin kala duwan, oo ay ka mid yihiin warar Algeria iyo xaaladda caafimaad ee Mr. Bouteflika by madaxa xafiiska AFP, laakiin iyada oo aan la siin wax caddayn ah oo khalad ah oo ku saabsan qaybtiisa. Intaa waxaa dheer, Mudane Vincenot marna fursad uma helin inuu ka jawaabo.
Editorial AFP The International daboolayaa dunida oo dhan news text, video, photo iyo computer muuqaallo kale ee lix luuqadood, saacadaha 24 24, sida ay shuruudaha tifaftirka ee ku qaxri jireen, madax-bannaanida iyo hannaanka. In ka badan macaamiisha 5.000 ayaa ku kalsoon. Booqo waddanka 151, AFP waxay leedahay xafiis Aljeeriya ilaa 1962.
Warbixintii ugu dambeysay ee Saxafiyiinta aan Xudduudda lahayn (RSF) ee caalamiga ah ee xoriyadda saxaafadda, Aljeeriya waxay ku haysataa booska 136th ee dalka 180.
- "Kalsooni" -
Dhamaadkii bishii Maarso, saxafiga Reuters, saxafiga Tunisia Tarek Amara, ayaa laga saaray magaalada Algeria, halkaas oo uu soo bandhigay mudaharaadyo ka dhan ah xukuumadda dhowr maalmood.
Mas'uuliyiinta Algeria ma aysan bixin wax faahfaahin ah. Reuters, qaybteeda, waxay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in weriyeyaashu ay aqoonsi u yihiin in ay u shaqeeyaan sidii ergo gaar ah.
Dhowr toddobaad ka hor, dersin saxafiyiinta Algeria ayaa la qabtay oo la xiray dhowr saacadood ka dib ka qeyb qaadanaya dibadbax si ay u dhalleeceeyaan cadaadiska gaaray iyo xadeyn ku saabsan caymiska dhaqdhaqaaqa dibad "rogeen (qiyaamada) madaxda."
RSF ayaa cambaareeysay xiritaankan iyo "faragelinta arxan-darrada bileyska".
War saxaafadeed ka soo baxay AFP, madaxa shirkadda Fabrice Fries, ayaa muujisay "iskaashiga" ee hay'adda "wariyayaasha Aljeeriya, oo si geesinimo leh ugu shaqeynaya shaqadooda xaaladaha adag ee adag."
wariye khibrad Aymeric Vincenot graduate ah School of Journalism (ESJ) ee Lille (woqooyi ee France), ayaa sameeyay hawlgallo beerta badan ee Hay'adda notamment- -in Africa oo horey u qaatay si uu jagooyinka mas'uuliyadda tan iyo bilowdeeda 2000.
Wuxuu u shaqeeyay Agaasime Ku-xigeenka Xafiiska Xarunta Afrika ee Xarunta Afrika (2004-2008), Ergeyga Gaarka ah ee Afqanistaan ​​(2011), iyo saxafiga Xafiiska Xafiiska Afrika ee Xafiiska Afrika. Bari iyo badweynta Hindiya, oo fadhigeedu yahay Nairobi (2012-2016).
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/10/le-directeur-de-lafp-alger-expuls-par-les-autorits-algriennes/